Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/andry
Proverb 105 Akaro , aidino , ohatra ny ondrin' ilay sarotra . [Houlder 1895, Rinara 1974]
Proverb 490 Andry be fiankinana . [Veyrières 1913 #804]
Proverb 491 Andry boboka : ny fahavalo tsy aiza fa eo am-povoan-trano . [Rinara 1974 #246]
Proverb 495 Andry ombin' Imalemifanahy : ny noana voasafosafo , ny voky voalambolambo . [Rinara 1974 #249]
Proverb 496 Andry ondrin' Ikotokely , ka ny maty no ananam-be . [Rinara 1974 #250]
Proverb 497 Andry telo itoviana aman' olona . [Veyrières 1913 #836, Rinara 1974 #251]
Proverb 498 Andri- tranon’ Ikaladedaka : ny any ny tena feno tain’ akoho , ka ilaozana mifafa ny an’ olona . [Cousins 1871 #216]
Proverb 942 Aza mananika andry malama . [Cousins 1871 #557]
Proverb 2152 Folaka andry niankinana , toro vato nandiavana . [Veyrières 1913 #809]
Proverb 4010 Mby amin' ny andry atsimo . [Veyrières 1913 #6573]
Proverb 4460 Mitsaitsaika fihavy ny tsy manan-dreny , manao fihavim-pangady , tsy miala fa ao am--pototr' andry . [Veyrières 1913 #1035]
Proverb 5160 Ny havana ataovy toy ny andry ombin' ilay mora : ny aloha voasafosafo , ary ny aoriana voatehatehaka . [Houlder 1895]
Proverb 5601 Ny toko telo mahamasa-nahandro . [Rinara 1974 #3308]
Proverb 6161 Raha tonga amin' ny andry ny andro . [Veyrières 1913 #6604]
Proverb 7904 Tsy toro vato nandiavana , na maty Vazaha nandrafitra . [Veyrières 1913 #3375, Cousins 1871 #3588]